Israel ichavhurazve miganho kune kushanya kwenyika kubva kuGreece muna Nyamavhuvhu 1
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » Israel ichavhurazve miganho kune kushanya kwenyika kubva kuGreece muna Nyamavhuvhu 1
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Greece News • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Israel Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Gurukota reGreek Rezvekushanya Haris Theoharis (kuruboshwe) uye Israel Gurukota Rezvekushanya, Asaf Zamir (kurudyi)
Nezuro, Mutungamiriri weIsrael, VaBenjamin Netanyahu vakasangana nemutungamiriri weGreek, VaKyriakos Mitsotakisis kuti vakurukure kuvhurwa kwekushanya pakati penyika mbiri idzi, idzo dzinozotanga musi waNyamavhuvhu 1, 2020. Vafambi vanouya kuIsrael vachibva kuGreek havazodi kutora chikamu mumazuva gumi nemana. Covid-19 kuiswa kunzvimbo yausingasangani nevamwe.
"Tinofara kuti takakwanisa kuronga zuva rekutangazve kushanya kwenyika, kutanga neGirisi," akadaro Asaf Zamir, Israel Gurukota Rezvekushanya. "Ichi chiitiko chakakosha kuvagari venyika dzedu mbiri uye danho rakakosha mukudzorera indasitiri yekufambisa kutenderera pasirese, zvichibatsira kutimisikidza isu tese kugadzirisa hupfumi zvichitevera denda iri."
"Kumisirazve ndege pakati pevaIsrael nevaGreek vafambi ndiyo nhanho yekutanga kuvhurazve nyika kune vashanyi pasi rese," akadaro Eyal Carlin, Israel Tourism Commissioner weNorth America. “Tinotarisira kuwedzera rwendo rwekunze pakati peIsrael neNorth America nenzira yakachengeteka, yakarongeka. Sezvatiri kutoona nendege dzichitangazve mwedzi uno kubva kuNorth America, uye nehutano hutsva huripo, indasitiri yekushanya muIsrael iri kushanda nesimba kuona kuti vafambi vanonzwa vakachengeteka pavanosarudza Israel senzvimbo yavo inotevera. "
Israel yakatanga kuvhurira nyika kushanyi yekumba nenzira yakapetwa muna Chivabvu 4, 2020. Mumwedzi yakati wandei yapfuura, Tourism Recovery Task Force yanga ichishanda pamwe chete nevakuru veMinistry kuisa chirongwa chekuvhurazve nyika zvakachengeteka nekushandisa hutano hwakakodzera. uye matanho ekuchengetedza kuchengetedza vafambi kuchengetedzeka, kusanganisira iyo Purple Standard yemahotera uye mamwe maitirwo emabhizinesi uye zvinokwezva.